Izindlela Ezi-9 Zokuzijabulisa Zokwenza Izitayela Zama-Jumpsuits Njengoba Kwenziwa NgamaCelebs - Kanjani
Izindlela Ezi-9 Zokuzijabulisa Zokwenza Izitayela Zama-Jumpsuits Njengoba Kwenziwa NgamaCelebs
9 Fun Ways Style Jumpsuits Like Celebs Do
Akudingeki ukuthi sibe nguRosie the Riveter phakathi kweziyaluyalu zeMpi Yezwe 2, kodwa siqinisekile ukuthi singalandela ezinyathelweni zakhe ezifanele futhi silingise isimo sakhe sengqondo. Ugqugquzele abesifazane abangabodwa ngesikhathi sakhe ukuba baphile ngesiqubulo sakhe esithi ‘Singakwenza,’ futhi uyaqhubeka nokwenza lokho njengesithonjana semfashini esikhuthaze ukuhlolwa okusha kwenkathi ngama-jumpsuits.
Izingubo zokugqoka zanamuhla zibonisa ukungaphelelwa yisikhathi nesitayela esingenamsebenzi. Kanye nezingubo zokubilisa nama-dungaree, ama-jumpsuits anomzuzu oshubile njalo eminyakeni embalwa. Sibona abaklami bephinda bevuselela lesi siqephu sakudala futhi basiphakamise ngezindlela zesimanje nezithakazelisa kakhulu.
Ngokombono, i-jumpsuit ingubo encane elingana, ehlanganisa izingalo nemilenze. Le (cishe) inhloko nozwane, ingubo yonke-inye ikuvumela ukuthi udlule ngale kwengubo elula noma inhlanganisela yejean-and-shirt. Futhi-ke, ivumelanise neminyaka namashumi eminyaka nezikhathi ezishintshayo. Yenziwe njengengubo yokusetshenziswa ngonyaka we-1919 yamapharashuthi, futhi uhambo lokuzithoba lwejumpsuit lokuthola amandla we-feisty amandla emgaqweni we-Balenciaga ngo-2002 kuyaphawuleka. Kusukela ku-denim wezingubo zokuqaqa zokuqala kuya esikhunjeni okukodwa kanye nemiklamo ehlotshiswe kakhulu, lesi sitayela sangaphambilini sezemidlalo singesinye sezingcezu ezithandwa kakhulu ekhabethe lezingubo zemfashini. I-jumpsuit isivele icatshangwe emigwaqeni yokubalekela izindlu nangaphakathi kwezindlu zikanokusho ezifana noChristian Dior, Balenciaga, Balmain, Missoni, Stella McCartney nezinye eziningi. Kusukela ekugqokeni okusemthethweni nokugqoka okungajwayelekile kukhaphethi obomvu nokulungela iphathi, indaba ye-jumpsuit ihlanganisa yonke i-spectrum.
Ukhiye wokuzamazama i-jumpsuit ukuthola ukulingana okufanele. Ukwahlulela okuncane ngokulingana, futhi ukubukeka kungasuka ku-fab kuya kudrabha ngokushesha. Ngenkathi ingubo ingaba inketho ejwayelekile lapho ukhetha ukuthi uzogqokani, cabanga nge-jumpsuit, futhi, njengenketho yesiyali. Ukuze uthuthukise ukubukeka ukuze kulungele lesi senzakalo, ukufinyelela izinsiza kusebenza kungumngane wakho omkhulu. Zama ibhande, ubucwebe kanye nesikhwama lapho ufaka isitayela se-jumpsuit. Ngemikhono engenamikhono noma engatheni kangako, kungezwa ijakhethi yesikhumba ukuqedela ukubukeka ngomphetho othile. Amabhuzu esitatimende noma amapheya amateki asezingeni eliphakeme ahambisana kahle nama-jumpsuits osuku oluvamile. Shintshanisa ngezithende njengoba ubusuku buya kobusha.
Silinganise ukubukeka kwethu okuyisishiyagalolunye kwe-jumpsuit okuyintandokazi kosaziwayo ukukusiza ohambweni lwakho lokuba yisithonjana sesitayela somgwaqo.
Ubukhazikhazi obuhle be-drape, imininingwane yokubopha ngemuva, nehlombe elingenalutho kusebenza isitayela esingenamsebenzi. UKarisma uzungeza ukubukeka ngezindophi zegolide, futhi asikwazi ukususa amehlo ethu kuye nakuye!
UShraddha ushaye ngesigqoko esikhanyayo esinemigqa nesiphrintiwe. Ukuhlangana esihlakaleni kunika ukubukeka okuhle, ngenkathi ibhande lidonsa ukubukeka okuhle ngokuphelele.
UDeveli usemininingwane uma kukhulunywa ngalesi jumpsuit ku-Alia Bhatt. Ukuphrinta okuphelile nemikhono kabhishobhi kubukeka ezingeni elisha ngokuphelele.
UShilpa Shetty Kundra
Thatha ukunaka kusuka ku-Shilpa Shetty Kundra ngokuletha injabulo yobuciko kwi-jumpsuit enhle endala ene-tie-n-dye.
USonam ufakazela ukuthi kungani eyindlovukazi yayo yonke imfashini ngalesi sikhwama esinepinki esishisayo esinehlombe elilodwa, yize kufanele sivume ukuthi asikwazi ukucabanga nganoma yimaphi ama-ensembles angahluleka ukuphuma noma kunjalo.
U-Aditi Rao Hydari
I-Aditi Rao Hydari iyisibonelo sobuhle bobukhosi kuleli hlombe elilodwa, elilandelwayo, i-navy jumpsuit.
UKajol ungowesifazane ohambweni kodwa enecala le-chic elula. Ukusikwa okuqondile kwemilenze kanye nesinqe esine-cinched kudonswa ngemininingwane yokubopha ethokozisayo. Ubucwebe begolide ukwengezwa okuphelele.
U-Anushka Sharma ususa le nombolo efakiwe ngemininingwane yokusika enomusa ongagudluki esinalo igama elilodwa kuphela lakho konke okwenzeka emfanekisweni - magnifique!
Flowy, flouncy futhi fabulous! I-jumpsuit ecekeceke futhi ecwebezelayo ka-Alaya enezicucu kungaba yinkanyezi kunoma yimuphi ukhaphethi obomvu!
Funda futhi: Kulesi Sizini, Ngeza Ukuvuselelwa Okusha Kwezembatho Zendabuko
singakwazi ukusebenzisa i-powder yokubhaka ebusweni
ikhambi lemvelo lokutheleleka kwefungal
indlela yokunciphisa izinwele ziwe ngokwemvelo
susa izinwele zobuso ngokwemvelo ekhaya